Na ntanetị akara mkpisiaka: Xiaomi chọrọ ya na ekwentị ya niile | Gam akporosis
Xiaomi chọrọ ịgbanwe ahịa maka ndị na-agụ akara mkpisiaka ihuenyo
Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ekwentị mkpanaaka dị elu, na ụfọdụ ndị ọzọ dị n'etiti, na-enweta ahịa na a na ihuenyo akara mkpisiaka. Anyị na-ekwu maka teknụzụ ọhụụ ọhụụ nke na-ewe nnukwu mmụba maka ahụmịhe onye ọrụ. O yikwara ka Xiaomi ị chọrọ iji melite arụmọrụ nke gị ike biometric agụ.
Ruo ugbu a, naanị ụdị ụdị OLED nwere ike ịnwe ụlọ dị otú a, ma ụlọ ọrụ Beijing na-arụ ọrụ na ngwọta nke ga-eme ka anyị tinye onye na-agụ akara mkpịsị aka na ihuenyo LCD ọ bụla, nke a na-ejikarị eme ihe n'ahịa, karịsịa na etiti na ọkwa ntinye.
Na nkenke, ụlọ ọrụ ga-eme ka anyị nwee onye na-agụ akara mkpịsị aka LCD
Ma ọ bụ nke ahụ, onye nrụpụta ihe ahụ bụ Fortsense, ewepụtala ihe karịrị ikike iri isii na isii maka azịza ihe ntanetịime ihuenyo nwere ike ịrụ ọrụ na ogwe LCD. Ọ dị ka ụlọ ọrụ a enweela ike imeri ọnyà nke nnyonye anya nke akara ngosi LCD capacitor, na-egosi atụmatụ nke ga-ekwe ka ndị nwere ụdị ụdị ihe a iji ihe mmetụta igwefoto.
Xiaomi Black Shark 2 gafere ule ntachi obi kacha mara amara
N'aka nke ọzọ, Xiaomi emeela ka o doo anya na ọ ga-arụ ọrụ n'ụdị ụdị a, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ n'afọ ọzọ. Ugbu a, ha na-akwado ekwentị ọhụrụ ga-efu ihe ruru yuan 2.000, ihe dị ka euro 250 ịgbanwe, nke ahụ ga-enwekwa akara mkpisiaka aka na ihuenyo ahụ. N'ezie, o yikarịrị ka otu ahụ bụ OLED. N'okwu onye isi ụlọ ọrụ China:LCD ihuenyo mkpịsị aka bụ teknụzụ kwere omume, ma na afọ a ọ ga-abụ obere yiri ka nwere a ngwaahịa igba egbe. Ihe kachasị ọsọ ga-abụ njedebe nke afọ ma ọ bụ yikarịrị ka ọ ga-esote afọ ọzọ… «
Ozi magburu onwe ya, ebe ọ bụ na n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ike ịnweta mkpịsị aka na ihuenyo ekwentị ọ bụla, yana ọnụahịa jọgburu onwe ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi chọrọ ịgbanwe ahịa maka ndị na-agụ akara mkpisiaka ihuenyo
Free Fire, nke a bụ asọmpi ọhụrụ nke Fortnite na PUBG maka gam akporo
Oppo Reno ji teknụzụ eji egwu ọdịyo nke Nokia